Ifotohop ye-iPad ngoku iyafumaneka Isinika ntoni le nguqulo? | Iindaba zeGajethi
Ifotohop ye-iPad ngoku iyafumaneka Isinika ntoni le nguqulo?
UIgnacio Sala | | Izicelo, amacwecwe
Ngokuqaliswa kwe I-iPadOS 13, UApple unike i-iPad isityholo esifunekayo ukwenza esi sixhobo sisixhobo esifanelekileyo sokutshintsha ilaptop yethu yakudala ngokukhanya, okuncinci kunye nokukhululeka ngakumbi ukuphatha isixhobo. Njengokuba iinyanga zihamba, kancinci kancinci izicelo zokufumana uninzi lwazo ziyeza.
Kukho abahleli bemifanekiso abaliqela be-iPad kwiVenkile ye App, nangona kunjalo, ayizizo zonke ezinikezela ngeempawu ezifanayo esinokuzifumana kwizicelo zeekhompyuter. Ngokufika kwe-Photoshop kwi-iPad, indlela yokuhlela iifoto kwi-Apple iPad iba lula kakhulu. Kodwa Ngaba iPhotohop isinika ntoni nge-iPad?
I-Photoshop ngowona mfanekiso ubalaseleyo kunye nesoftware yoyilo emhlabeni, injengomculo weSpotify okanye iNetflix yevidiyo esasazayo. Wonke umntu uyazi amanqaku e-Photoshop, ke siza kukuxelela kancinci okanye akukho nto malunga nesi sicelo ongazi kakuhle. Ngokukhutshwa kwenguqulo ye-iPad, sinako hlela nawuphi na umfanekiso okanye wenze nantoni na ethi qatha engqondweni.
1 Ifotohop ye-iPad, into ebesiyilindile sonke
1.1 Yenza iifayile kwifomathi yePSD
1.2 Ifomathi efanayo nohlobo lwe desktop
1.3 Sebenza naphi na
1.4 Rhweba ngaphandle kwezinye iifom
1.5 Hlela ngokukhawuleza iifoto
1.6 Sebenza ngesandla nePensile ye-Apple
2 Ifotohop iyahambelana nezixhobo ze-iPad
3 Imida ye-Photoshop ye-iPad
4 Ifumaneka kuphela ngesiNgesi (okwangoku)
5 Ixabisa malini i-Photoshop ye-iPad?
Ifotohop ye-iPad, into ebesiyilindile sonke
Njengoko inkampani isitsho, le nguqulo yokuqala ijolise ekudibaniseni nasekusebenziseni izixhobo kwakhona yenzelwe ukusebenza kwi-iPad ngePensile ye-Apple, ayisisixhobo esibalulekileyo kodwa esinceda kakhulu xa usebenza nesicelo.
Yenza iifayile kwifomathi yePSD
Ifomathi yePSD yile isetyenziswa yiFotohop, ifomathi leyo isinika ubuchule obungakholelekiyo Ngokugcina yonke imixholo ngamanqanaba, iileya esinokuthi sihlele, sicime, sidibanise, siphinde sizibambe ngokuzimeleyo. Imisebenzi esiyenzayo kwi-iPad inokwabelwana ngayo nasiphi na isixhobo esisebenzisa i-Photoshop okanye umhleli oxhasa le fomathi.
Ifomathi efanayo nohlobo lwe desktop
Ukwenza kube lula ukusebenzisa le nguqulo intsha yeepilisi, kwaye akukho ndawo yokufunda, iFotohop ye-iPad isibonisa Uyilo olufanayo esinokulufumana kwinguqulelo yedesktop. Kwicala lasekhohlo sifumana zonke izixhobo ezikhoyo kwaye ngasekunene kwescreen ukulawulwa kweendlela ezahlukeneyo esizenzayo.
Sebenza naphi na
Zonke iifayile esizenzayo kwifowuni yethu zigcinwa ngokuzenzekelayo kwilifu le-Adobe, elisivumelayo fikelela nakweyiphi ikhompyutha usebenzisa iakhawunti efanayo yeAdobe, ke siyakuphepha ukuthumela iifayile ezinzima esizenzayo ngeposi, kumaqonga emiyalezo ...
Kwakhona, naluphi na utshintsho esilwenzayo kwimifanekiso Ukuba sihlela zigcinwa ngokuzenzekelayo kwilifu le-Adobe, esivumela ukuba siqhubeke ngokukhawuleza ukuhlela imifanekiso kwikhompyuter yethu ukuba nangasiphi na isizathu, inguqulelo ye-iPad ayikuvumeli okwangoku.
Rhweba ngaphandle kwezinye iifom
Ifomathi yePSD isivumela ukuba sigcine zonke iileya / izinto esizibandakanyileyo kumfanekiso esizenzileyo ngokuzimeleyo kodwa kwifayile enye, esivumela ukuba sicime okanye sihlele iileya nanini na xa sifuna. Ngexesha lokwazisa ngomsebenzi wethu, uxwebhu aluzange luziswe ngefomathi yePSD ukuze lube nokuhlengahlengiswa, kodwa zonke iileya ziqokelelwe kwinto enye, ezinje ngeefomathi I-PNG, JPEG kunye ne-TIFF, ifomathi apho singathumela ngaphandle iifayile esizenzileyo kunye nesi sicelo.
Hlela ngokukhawuleza iifoto
Susa ukubengezela okungafunekiyo, sebenzisa amacebo okucoca ulwelo, sebenzisa isixhobo se-clone ukulahla izinto ezingafunekiyo ... konke oku kunokwenzeka njengoko sinokwenza okwangoku kwinguqulelo yedesktop, nokuba kungePensile ye-Apple okanye ukusebenzisa iminwe yethu kwiscreen.
Sebenza ngesandla nePensile ye-Apple
Njengokuba ukubetha kwethu kuyintsimbi, Ukusebenza ngePensile yeApple kwiFotohop ye-iPad kusinika ukuchaneka esingathanda ukuba sisebenzise imouse, ngakumbi xa sisebenzisa iibrashi ezahlukileyo ezenziwa sithi zifumaneke sisicelo.
Ukongeza, khetha ngesandla, ngesixhobo seLasso ukwenza iileya ezintsha, faka iziphumo, gubungela igalelo, wenze nawuphi na omnye umsebenzi yimpepho ngePensile yeApple.
Ifotohop iyahambelana nezixhobo ze-iPad
Ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Photoshop ye-iPad, imfuneko yokuqala ebalulekileyo kukuba isixhobo sethu ilawulwa yi-iPadOS, ke zonke iimodeli ezingakhange zihlaziywe kwi-iOS 13 azinakho ukufaka usetyenziso.
IPad Pro (12.9-intshi) Zonke iimodeli
IPad Pro (10.5-intshi)
IPad Pro (9.7-intshi)
I-iPad yesihlanu isizukulwana ukuya phambili.
iPad Mini 4 ukubheka phambili.
iPad Air 2 ukubheka phambili.
Isizukulwana sokuqala nesesibini sePensile yeApple. Akuchazwanga ukuba Ikhrayoni yeLogitech, Ipensile yexabiso eliphantsi yeApple iyahambelana, kodwa kunokwenzeka ukuba kunjalo.
Imida ye-Photoshop ye-iPad
Ukuba i-iPad yethu indala, eminye yemisebenzi esisinikwa sisicelo, njengempembelelo, azifumaneki. Eminye imisebenzi enjengezihluzi ze-smart azikabikho, ezakusinyanzela ukuba sisebenzise uhlobo lwekhompyuter. Olu thintelo lubalulekile kodwa kuguqulelo lweFotohop ye-iPad, kuba kubasebenzisi abathile inokuba sesona sixhobo sisetyenzisiweyo nesibonelela ngobuchule obukhulu.
Ifumaneka kuphela ngesiNgesi (okwangoku)
Ukuba uhlala usebenzisa uhlobo lweFotohop kwikhompyuter yakho (iPC okanye iMac), uya kuthi usebenzise uhlobo olufumaneka ngeSpanish. Inguqulelo ye-iPad, okwangoku, Ifumaneka kuphela ngesiNgesi. Into ekuthiyori inokuba sisithintelo, ekugqibeleni ayisiyiyo, kuba imisebenzi esisinika yona imelwe ziimpawu, ezifanayo nesinokuzifumana kwikhompyuter, ngaphandle kokuba awusebenzisanga esisicelo, uya kuthi ungabinangxaki ukuyifumana ngokukhawuleza.
Ixabisa malini i-Photoshop ye-iPad?
Ukukhuphela i-Photoshop ye-iPad kunjalo Isimahla (ayihambelani ne-iPhone). Ukufumana okuninzi kuyo kwaye usebenze ngayo, kuyimfuneko ukusebenzisa ubulungu benyanga obunexabiso le-10,99 euro ngenyanga. Ukuba awuqinisekanga ukuba le nguqulo ye-iPad ikunika oko ukufunayo, iAdobe isivumela ukuba sizame isicelo simahla kunye neentsuku ezingama-30.
Ukuba sivavanya isicelo kwiintsuku ezingama-30 zokuqala, kufuneka sikhumbule ukuba kufuneka rhuma ngenyanga (inkqubo esinokuzenza zombini ukusuka kwi-iPhone nakwi-iPad) ukuba asizicwangcisi ukuqhubeka nokusetyenziswa kwesicelo kwixesha elizayo, kuba kungenjalo siza kuhlawuliswa i-10,99 euro ngenyanga ngobhaliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Ifotohop ye-iPad ngoku iyafumaneka Isinika ntoni le nguqulo?
I-Arbily G8, i-TWS i-Hi-Fi yentloko enoyilo olunesibindi
Ndiyitshintsha njani i-IP yoluntu